Sheekada filimka Manikarnika – The Queen Of Jhansi: Kangana awoodeeda iyo fariintiisa wacan u daawo filimkan – Filimside.net
Sheekada filimka Manikarnika – The Queen Of Jhansi: Kangana awoodeeda iyo fariintiisa wacan u daawo filimkan
January 26, 2019 Zakarie Abdi
Taariikhda: January 26, 2019
Dhawaan Bollywood-ka waxaa Blockbuster weyn u noqday filimka URI: THE SURGICAL STRIKE oo fariin waaqici ah xambaarsanaa sidoo kalena daawadayaasha siweyn kaga heleen. Haatana labo todobaad kadib guushii filimka Uri waxaa masraxa lasoo saaray filimka MANIKARNIKA – THE QUEEN OF JHANSI ee Kangana Ranaut hogaamiye ka tahay sidoo kalena fariin waaqici ah xambaarsan loogana hadlaayo boqoradii geesiyada ahayd ee gumeysigii Ingiriiska la dagaashay Jhansi.
Jilaayaasha filimkan: Kangana Ranaut, Ankita Lokhande, Atul Kulkarni, Jisshu Sengupta, Suresh Oberoi, Danny Denzongpa
Fariinta Filimka Manikarnika Oo Kooban: Waxaa looga hadlaa noloshii boqorada geesiyada ahayd Rani Laxmibai. Manikarnika (Kangana Ranaut) oo ku nooleed Bithoor waxaana soo bar baariyay aadna u jecel Peshwa (Suresh Oberoi).
Maalin maal maha ka mid ah suldaanka caanka ah Jhansi (Kulbhushan Kharbanda) ayaa arkaayo sida ay dagaal yahay awood badan u tahay Manikarnika (Kangana Ranaut) wuxuuna weydiisanaa Pesha (Suresh Oberoi) in gabadhiisa lagu daro wiilkiisa Gangadhar Rao (Jisshu Sengupta) oo boqortooyada Jhansi hogaamiyo.
Jhansi (Kulbhushan Kharbanda) wuxuu u ogyahay in boqortooyadiisa gumeysiga Ingiriiska ka bad baadi doonin wuxuuna og yahay kaliya Manikarnika (Kangana Ranaut) inay tahay qofka la dagaalami karo Ingiriiska madaama ay geesiyad tahay wuxuuna ku daraa wiilkiisa Gangadhar Rao (Jisshu Sengupta) si ay halista kaga bad baadiso magaca boqortooyada reer Jhansi na waan la siinaa.
Laakiin talaabo walbo ay qaadeen boqortooyada Jhansi waxaa ka xun Sadashiv (Mohd. Zeeshan Ayyub) oo la dhashay boqorka reer Jhansi ugu sareeyo Jhansi (Kulbhushan Kharbanda) wuxuuna la saaxiibaa gumeysiga Ingiriiska si uu boqortooyada isaga ula wareego wax walbo ayuu sameenaa.
Manikarnika Laxmibai (Kangana Ranaut) seygeeda Gangadhar Rao (Jisshu Sengupta) wuu xanuunsanaa kadibna wuu iska geeriyoonaa taasi oo ku qasbeyso marwadan inay awooda boqortooyada la wareegto madaama seygeeda geeriyoonayo caddowgana ku badanaayo waxayna diideysaa inay Ingiriiska la xaajooto ayadoo diyaar u noqoneyso inay boqortooyadeeda ka difaacato gumeysiga Ingiriiska.
Haddaba qeybaha dambe filimkan waxaa loo daawan doonaa sida Manikarnika Laxmibai (Kangana Ranaut) boqorada reer Jhansi sida ay Ingiriiska awooda badan isaga dhicin doonto ayadoo dadkeeda qaar caddow ku yihiin oo gumeysiga Ingiriiska la jiraan.
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka Manikarnika: Qoraaga sheekada filimkan waa ruug cadaa K V Vijayendra Prasad oo horey aflaan Classic ah sida labada Bahubali iyo Bajrangi Bhaijaan haatana sheeko sahlan oo boqortooyo la fahmi karo ayuu la yimid isku xir ahaana si heer sare ah ayuu u qoray. Qaybta hore xoogaa waxyar caajis ah ayaa ku jiro mashruucaan laakiin halka saac dambe inaba caadi ma ahan dagaalka, qiirada iyo hagardaamada boqortooyada ka jirto iyo geesinimada Kangana soo bandhigeyso.
Radha Krishna Jagarlamud iyo Kangana Ranaut oo filimkan isla sameeyeen si qurux badan ayay sheekada u agaasimeen mana loo maleeyo filimkan labo shaqsi inay Director ka noqdeen waxayna Kangana ku amaan tahay inay si wacan fariinta u dhigtay siweyna isugu daba riday mustaqbalka filim sameeye dhameestiran ayay noqon kartaa.
Bandhiga Jilaayaasha: Kangana Ranaut waxay la timid bandhig Classic ah xidigtan door dhib badan ayay dooratay laakiin si qurux badan ayay kaga baxsatay waxaa hubaal ah xidigtaan Manikarnika inay abaal marino ku qaadan doonto. Kangana waa hogaamiye ee ma ahan atirisho waayo filimkan awood lixaad leh ayay dhan walbo kusoo bandhigtay Action-ka, dareenka qiirada badan iyo jaceylka dalkeeda iyo dadkeeda u qabto.
Jisshu Sengupta doorkiisa caawiyaha waa mid la jeclaan doono qaabka uu u jilay. Ruug cadaa Suresh Oberoi si heer sare ah ayuu doorkiisa kaga baxsaday. Sidoo kale halyee Danny Denzongpa doorkiisa Ghulam Ghaus Khan waa mid saameyn leh si lama filaan ah mashruucaan kusoo galaayo. Dhamaan jilaayaasha kale ee kasoo muuqdeen filimkan doorarka caawiyaha ah ku lahaa siweyn ayay kaalintooda kaga baxsadeen.
Muxuu Ku Wanaagsan Manikarnika:
Bandhiga Kangana Ranaut dhan walbo inaba caadi ma ahan
Action-ka iyo dareenka qiirada badan filimkan xambaarsan yahay
Muusiga gadaal ka yeereyso oo heer sare ah iyo heesihiisa oo saameyn xoogan leh
Fariintiisa oo loo dhigay qaab la fahmi karo halka saac dambena heer sare ah
Muxuu Ku Liitaa Filimka Manikarnika:
Halka saac hore caajis ayaa ka muuqdo fariin ahaan.
Aflaanta boqortooyada dhawaanahan la daawaday sida BAAHUBALI [2015, 2017], BAJIRAO MASTANI  iyo PADMAAVAT  marka lala bar bar dhigo Manikarnika ma gaaro tayo ahaan laakiin kama liito.
Gunaanad: Manikarnika waa filim boqortooyo oo fariin sahlan xambaarsan qof walbana fahmi karo si wacana loo dhigay una dheer tahay bandhiga Kangana oo qof walbo soo jiidanayo iyo halka saac dambe oo heer sare ah waxay ka caawin doontaa mashruucaan in daawadayaasha soo dhaweeyaan ganacsi wacana sameeyo sidoo kalena maalinta Jamhuuriga Hindiya fasaxa qaran Jiro Sabtiga ayadoo culeeska kaliya kaga imaan karto miisaaniyada xoogan ee filimkan xambaarsan yahay.
Fadlan hoos kaga bogo goos gooska MANIKARNIKA – THE QUEEN OF JHANSI ee Kangana Ranaut sida weyn loogu amaanay:
Waxaa Aqrisay 810